रेडियो हाम्रो पहुँच ८९ मेगाहर्ज
रेडियो हाम्रो पहुँचको वारेमा
साथि संग मनका कुरा यस पछिको कार्यक्रम
साथि संग मनका कुरा 4:00 pm-5:00 pm
खवर देशभरका 5:00 pm-5:20 pm
वाल कार्यक्रम 5:20 pm-5:40 pm
विज्ञापन तथा सन्देशहरु 5:40 pm-5:45 pm
उपन्यास अंश- ऊ असुरक्षा मान्छे »
बाल्यकाल बिर्सनकै लागि हो । तर, जुन कुरा बिर्सन सकिँदैन, त्यो मर्ने बेलासम्म पनि झन् सम्झिरहिन्छ जस्तो भइरहेछ ।
घाम उदाउनै लागेको पूर्वको रातो आकाश हेरेर आफू जन्मेको सम्भिmन खोजी । सम्झिन नसकेर आमाको मुखबाट सुनेकै भरमा सम्झी । सुनेको कुरा सम्झिन सजिलो हुँदो रहेनछ । उसलाई यस्तै लाग्यो ।
सम्झिएर अतीत छाम्ने प्रयत्न गर्दै एक्लै मनमनै बोल्न थाली- सल्यानको निगालचुगा गाउँमा जन्मेकी अरे म, आमा सुतेकै ओछ्यानमुनि । जन्मिएर रोएपछि मात्र ब्यूँझेका अरे बा । कस्तो गहिरो निद्रामा सुतेका सुत्न पनि ? दिनभरिको कामले थाकेर होला नि ।
कति खप्न सकेकी आमाले पनि ? नानी पाउने व्यथा लाग्दा पनि बालाई नउठाउने ? मलाई भने खप्ने कुरा के थाहा जन्मनेबित्तिकै ?
धरती छुनासाथ रोइछु च्याहाँ… च्याहाँ… च्याहाँ… ! बा ब्यूँझेछन् । छोरा भयो कि छोरी ? सोचेछन् । उज्यालो भएपछि थाहा भयो अरे- छोरी जन्मेकी रहिछ । दस महिनासम्मको जिज्ञासा र कुतूहलताको थाहा छामेर भए पनि लिनुपर्ने हो आमाले त अँध्यारोमै ।
आमाका कुरा- प्रजातन्त्र जन्मेकै वर्ष छयालीस सालको अन्तिम महिनाको अन्तिम गतेको अन्तिम समयमा उज्यालो नहुँदै जन्मेकी अरे म । जन्मेको केही समयपछि उज्यालो भयो अरे । उज्यालो पहिलेको जस्तै लागेर आमालाई प्रजातन्त्र आएको हो कि होइन, शङ्का लागेको थियो अरे । आफ्नै कानले रेडियोमा सुनेकाले पत्याएका बाले बुझाएजस्तो गरेपछि आमाले बुझेजस्तो गरेकी अरे ।
यी सबै सुनेको भरमा उसले सम्झिएका कुरा । बाल्यकाल सुखद होस् कि दुःखद, बच्चाका लागि के फरक पर्छ र ? उसलाई पनि केही फरक परेन । सबै बच्चा हुर्किने तरिकामा हुर्किई ऊ । आमा र समय मिलेर हुर्काए । आमा र समयमा कसको भूमिका बढी भन्ने कुरा टुहुरा केटाकेटीलाई थाहा होला । एउटै त रहेछ आखिर सबैको हुर्किने अभौतिक प्रक्रियाको भूमिका ।
बाको अनुहार सम्भिmने प्रयास गर्दा अरु सम्झिन्न । तमाखु तानेर मुखबाट धूवाँ निकालेको र त्यो धूवाँमा आफू हराएको सम्झिन्छे । लुकेर बाको तमाखु तान्न लाग्दा उसको पालोमा चिलिममा आगो निभिसकेको हुँदो रहेछ । धूवाँ आउँथेन । पानी मात्र कराउँथ्यो । हुक्काको पानी कराएको आवाजसँग रमाउँथी ।
डोको बुनिरहेको बेला बाले, डोकाको आँखा गनेर बसेको, चोया काड्दा हात काटेको, बाले रक्सी खाएर आमालाई पिटेको, पिटेपछि झन् माया गरेर फकाएको, तर आमाको अनुहार बासँग धेरै बेरसम्म रिसाएको सम्झी ।
अझै अगाडि सम्झी- घरमा बसिसाद्धे थिएन । बन्दुक लिएका मान्छेहरु आकोआई गर्थे । बन्दुकको भन्दा बन्दुक बोक्ने मान्छेको बढी डर भयो ।
त्योभन्दा पनि डर हैजाको भयो । बर्खाको बेला । एक्कासि फैलिएको हैजाले गाउँमा मात्रै तीस-पैतीस जनाको ज्यान गयो । त्यसमा उसका दुई भाइ पनि परे । बा पनि परार हैजाकै महामारीमा गए । आमालाई त्यो ठाउँ चिहानजस्तो लाग्यो । पटक्कै बस्न मन लागेन । आमाले पनि बाँच्न मन गरिन् । मलाई पनि बचाउन खोजिन् । बाँच्ने नै हो भने त्यहाँ बस्न नहुने आमाले ठम्याइन् ।
एउटा तन्ना र आमाको पोल्टामा जे भएको श्रीसम्पत्ति र लुगाफाटो अटायो । त्यसपछि तीन दिन हिँडेर, त्यसपछि गुडेर नेपालगन्ज आइएछ ।
म नभएको भए आमा त्यतै भीरबाट फदालेर मर्छु कि जस्तो गरेकी थिइन् अरे । आमालाई नमर भन्ने अरु कोही थिएन । आमालाई मैले नै बाँच्न बाध्य बनाएजस्तो भयो । बल्लबल्ल बाँचेकी आमा पनि । भन्थे- उनन्साठी साल हो । त्यही साल सुरक्षित बाँच्न सहर, सहरको पनि मन्दिर आएकी आमा, बेवारिसे भएर मरिन् । सानोमा झैँ बचाएजस्तो गर्न सकिनँ मैले आमालाई !’ सोचेर ऊ निकै बेर खुब घोरिई ।
उसलाई चौध वर्षकी बनाएर (आफै भएकी ?) उसकी आमा मरी । अब उसलाई सुरक्षा कसले दिन्छ ? सुरक्षा पाइने ठाउँ चारैतिर हेरी । केही देखिन । धेरै बेरपछि उसले देखी- मन्दिर । त्यही मन्दिरले गर्ला घरको काम । मन्दिरका देवीदेवताले गर्लान् सुरक्षाको काम (बा, आमा, लोग्नेको काम ?), सोचेर आँसु पुछी । पुछेको आँसु चुहिँदै कुहिनाबाट खस्यो ।
कहिल्यै कुहिनाबाट आँसु खस्ने गरी रूनुपरेको थिएन । त्यत्रो दुःख पर्दा रोइन । बा मर्दा रोइन । दाइ मर्दा रोइन । बरू भोक लाग्दा रोई । आमाले पिट्ता रोई । तर, हत्केलामै सुक्ने आँसु रोएकी थिई । कुहिनैबाट आँसु चुहिने गरी रोएकी थिइन । कुहिनाबाट आँसु झार्ने गरी रोएको पहिलोपटक आमा मर्दा नै हो ।
मान्छेहरु उसकी आमालाई बौलाही भन्थे । बौलाहीकी छोरी बौलाही त होली, तर आफू बौलाही हुँ भन्ने थाहा छैन उसलाई । अरुले कसरी थाहा पाए ? आमाले आफूलाई खुब माया गरेको सम्झी अनि हाँसिरहने स्वभाव पनि । रिस उमार्ने कुरा केही थिएन घर, जग्गा, धनसम्पत्ति, छिमेकी, आफन्त, लोग्ने, सन्तान । ऊबाहेक ।
मन्दिर, घर नहुनेहरुको घर । प्रसाद, भोजन नहुनेहरुको भोजन । त्यसैले मन्दिरमा बाँचुन्जेल बाँच्न सजिलो होला अन्तभन्दा । किनभने त्यहाँ भगवान् छन् । नजिक भएपछि सबै भगवानले देख्छन् । बदमासी गर्नेहरु पनि भगवानसँग डराउलान् । सुरक्षित भइएला । उसकी आमाको यो विचारलाई उसले आफ्नो पनि विचार बनाई ।
त्यो बेला आमासँग सोधेकी थिई- ‘केको सुरक्षा ?’
खै के भनिन् आमाले उति बेला ।
-हामीसँग सुरक्षा गर्नुपर्ने के छ र ?’ त्यो पनि सोधेको सम्झी तर उत्तर सम्झिन ।
- जे भए पनि सबै कुरा भगवानले सुरक्षा गर्देलान् नि !’ सोची ।
आमा मरेपछिको सानैमा उसलाई घर कहाँ हो ?’ सोधेको थियो कसैले । उसले मन्दिर देखाएकी थिई । उत्तरबाट मनोरञ्जित भएर सोध्नेले फेरि सोधेको थियो । त्यो झन् मनोरञ्जित भएर बौलाहीलाई जे भने पनि हुन्छझैँ भनेको उसले बुझ्न सकिनँ । देवताहरुलाई सङ्केत गरेर भन्यो
- ती त नपुंसक हुन् ।’
- तेत्तीसकोटी कहाँबाट जन्मे त ?’
- तो त उहिलेको कुरा ।’
-भगवान् कहिल्यै मर्दैनन् । मेरा बाआमा मरे ।’
त्यसपछि त्यसलाई मनोरञ्जन गर्न पुगेछ । गयो ।
घरमा खुइलिएको सानो ऐनामा हेरेकी थिई धेरै पटक आफ्नो अनुहार । तर आˆनो अनुहार बोध गरेकी थिइन उसले । वागेश्वरीको तलाउमा कति पटक आफूलाई देखी होली । मन्दिरतिर भित्तामा हुँदो हो ऐना पनि । हेरी होला । तर, बोध गरेकी थिइन ।
आमा मरेको वर्ष । वर्ष के भन्नु महिना । तलाउमा निहुरिएर नुहाउँदा उसलाई आफ्नो अनुहार बोध भएझैँ भयो । जहाँ देखे पनि आफूलाई चिन्छुजस्तो भयो । नुहाउँदानुहाउँदै आफ्नो अनुहार देखेर घीन लाग्यो- छिः कति नराम्रो अनुहार ! पानीमा देखिएको अनुहार हेर्दै नुहाउँदा पिसाब आयो । फेरिदिई । त्यही बेला च्याप्यो, के गर्ने त ? तलाउमा कसले थाहा पाउँछ र ?
सधैं देखेको आफ्नो अनुहार थाहा पाएर उसलाई आफ्नै अनुहारप्रति घृणा जाग्यो । आफ्नो रुपको सौन्दर्य महसुस नहुँदा आफ्नो अनुहारप्रति कति महान् गर्व थियो उसलाई । कालो, त्यो पनि फुस्रो कालो अनुहारमाथि नमिलेको नाङ्गो ध्वाँसे रूखो पहाडजस्तो नाक, नाकमाथि फोहोर तलाउजस्ता आँखा । नाकतल खडेरीमा धाँजा फाटेको खेतजस्तो मुख । बिग्रिन लागेको नासपतीजस्ता गाला । झाडीजस्तो कपाल । कुरुप रुखमा बैंसका दुई फल फलेको देखी आफ्नो छातीमा, आफूलाई उभिएर हेर्दा ऐनामा ।
नुहाएपछि राम्रो होला अनुहार । धोइएला असुन्दरता । आशा पलायो तर नुहाएर हेर्दा पनि उस्तै देखी कुरुपता । तलाउको पानी मैलो भएर हो कि भन्ने सोचेर मन्दिरअगाडिको ऐना हेरी । झन् प्रस्ट भएको कुरुपता उसलाई हेरेर खिसी गरिरहेको थियो । धेरै समयसम्म आफ्नो कुरुपताले नै तर्सायो उसलाई । बिस्तारै तर्सिने बानी पर्दै गएपछि तर्सिनै छाडी । पछि त्यही कुरुपता नै उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी भयो ।
आफ्नै नाम सम्झी- सुन्दरी !
सानैदेखि आमाले ‘सुन्दरी’ भनेर बोलाउँदा मक्ख हुन्थी । सबैले हाँस्तै सुन्दरी भनेर बोलाउँदा झन् मक्ख हुन्थी । पछि आफ्नो रुप थाहा पाएपछि उसलाई सुन्दरी नाम मन परेन । अझपछि सुन्दरीको अर्थ बादर्नी भन्ने थाहा पाएर आफूले गर्व गरेको नामप्रति घृणा लाग्यो उसलाई । आमाले के बुझेर सुन्दरी राखिदिएकी होलिन् ? दङ्ग परी ।
आफू तरूनी भएको पनि थाहा पाई एक दिन । तलाउमा छाती नाङ्गै पारेर नुहाउँदा फूलप्रसाद बेच्ने कमलादिदीले उसलाई छाती ढाकेर नुहाउनुपर्छ अब, यी मैले जस्तै भनेपछि एक बिहान उसले पनि छाती छोपेर नुहाउन थालेकी थिई । त्यसपछि आˆनै छाती पनि लुकेर हेरेकी थिई । छोप्नुको रहस्य बुझ्न सकिन । पछि लाज लाग्न थाल्यो । रहस्य त्यही लाज होला भन्ने सम्झी ।
बिहानै उठी । आफूले भ्याएसम्म आफ्नो घरजस्तै गरेर मन्दिर बढारी । बढार्दाबढार्दै उसलाई बोध भएजस्तो भयो- भगवान्ले पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने कुरा हुँदा रहेछन् । मन्दिरमा पनि मान्छे सुरक्षित बाँच्न सक्तो रहेनछ । भगवान्कै घरघडेरी पनि सुरक्षित रहेनछ ।
सम्भोग गरेर फ्याँकिएका कन्डमहरु आफैले बढार्दा उसलाई रहस्य थाहा भयो । पहिलेपहिले पनि बढारेकी थिई तर नचिनेरै बढारेकी थिई । पछि गोमा दिदीले भनेर पो थाहा पाई । आमा गलत रहिछन् । गलत विचार लिएरै मरिन् ।
जब उसले उसकै साथीहरु कमला, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सीताको घटना सुनी । केही देखी पनि । तिनीहरु त्यही मन्दिरपरिसरमै सुरक्षित बाँच्न सकेनन् । त्यो असुरक्षा सुरूमा एकदम भयानक र डरलाग्दो भएर आयो र सबैभन्दा बढी लाजमर्दो भएर आयो । पछि उनीहरुलाई असुरक्षाको बानी पर्दै गयो । उनीहरु असुरक्षा बाँच्छन् । असुरक्षामा पनि उसै गरी बाँच्छन् । बाँचिरहेछन् ।
मन्दिरअगाडि तलाउको किनारमा दुईतिर मात्रै भित्ता र माथि छ त जस्तो छानो भएको ओतमुनि उसको सुत्ने ओछ्यान थियो । सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसर बढारेबापत पुजारीले दिएका थोत्रा, फाटेका, प्वाल परेका र पर्नै लागेका, तर उसलाई अझै बेरिन हुनेजस्ता अर्दना धोतीहरुलाई दुईतिर भित्ता बनाएर उसले आफ्नो सुत्ने ठाउँ सुरक्षित बनाएकी थिई । त्यही फाटेका धोतीहरुको बारले आफूलाई सुरक्षित बनाएको हो भन्ने आभास थियो उसलाई ।
देख्थी, यसो सहरतिर हिँड्दा गाईहरु, गधिनीहरु, कुकुर्नीहरु, जो छाडा साँढेहरु, गधाहरु र कुकुरहरुबाट किन त्यति सुरक्षित बाँच्न सकेका ? ती पशुहरुलाई खोइ सुरक्षा चाहिएको ? खोइ तिनीहरुलाई असुरक्षाको डर ? किन डराउँछन् आइमाईहरु ? किन त्यति डरलाग्दा हुन्छन् लोग्ने मान्छेहरु ?
देख्थी, मन्दिर परिसर तथा फूलबारीतिर, पार्कतिर फूलहरु फुलेका । किन यति निर्धक्क फुल्न सकेका फूलहरु ? यी फूलहरुलाई डर हुँदैन मान्छेलाई जस्तो ? लुटिँदैन फूलको जवानी ? कि यो जवानी लुटिन्छ भन्ने कुरा नै वाहियात हो ? भ्रम हो ?
देख्थी, चराहरु निर्धक्क उडेका । बसेका । चारा टिपिरहेका । एउटै रुखमा सँगै गीत गाइरहेका । यी परेवीहरु, ढुकुर्नीहरु, भँगेरीहरु… कसरी आफूलाई सुरक्षित सम्भिmएका ? कसरी निर्धक्क बाँचेका ? भँगेरीहरु खोइ डराएका भँगेराहरुसँग ? ढुकुर्नीहरु खोइ डराएका ढुकुरहरुसँग ? परेवीहरु खै डराएका परेवीहरुसँग ?
बरू पन्छीहरु पनि मान्छे देखेपछि, मान्छेनजिक आएको देखेपछि डराएर भाग्छन् । मान्छेमा पनि अझ लोग्ने मान्छे किन यति डरलाग्दो हुन्छ हँ ?
भनिएका निर्जीवहरुले नै बरू सबैभन्दा बढी सुरक्षा दिइरहेछन् । जस्तो- ढुङ्गा, माटो, हावा, पानी, प्रकाश… । हावा, पानी, ढुङ्गा, माटो प्रकाशजस्तो सजीव अरु के हुन्छ ? त्यसपछि निश्चल रुखहरु । त्यसपछि विवेक नभएका पशुहरु, पन्छीहरु । सबैभन्दा असुरक्षा दिने त मान्छे । उसको विवेकले असुरक्षा किन गर्छ ?
मन्दिरका साधुहरुबाट यी सबै कुरा सुनी उसले तर मनन गर्न सकिन । उसले साथीहरुबाट सुनेकी थिई- लोग्ने मान्छेहरुबाट सुरक्षित रहनुपर्छ । तिनीहरुलाई आँखा जुधाएर हेर्नुहुन्न । हाँस्नुहुन्न । नजिकिँदै जानुहुन्न । सकेसम्म तर्किनुपर्छ । उनीहरु आˆनो नियन्त्रणमा लिन्छन् पूरै शरीर । त्यसपछि फुत्कन गाह्रो हुन्छ तिनका पन्जाबाट । तिनीहरुले कागती निचोरेझैँ निचोर्छन । र, पैतलाले कुल्चेर जान्छन् ।
यसरी जोगिँदाजोगिँदै पनि भएका विभिन्न घटनाहरु सुनाउँथे उसलाई उसका सँगीहरु- ती पटकपटक आउँछन् । फरकफरक रुपमा आउँछन् । विभिन्न मान्छेहरु आउँछन् । त्यसरी जन्मेको बच्चाले कहाँ अधिकार खोज्ने ? सबैका आँखामा घृणित भएकी, बिनाबाबु बच्चा पाएकी अबलाले कसरी जीवन बाँच्ने ? कहाँ खोज्ने स्वास्नीको अधिकार ?
यस्ता घटना सुनेर ऊ धेरै सजक थिई । तर, उसलाई आजसम्म कसैले छोएको थिएन । कसैले आँखा जुधाएर इसारा गरेको समेत थिएन । मुस्काएर कसैले उसका लागि ओठ टोकेको थिएन । हात समाएको थिएन । राति कसैले तानेर कतै झाडीमा लगेको थिएन । उसकै ओछ्यानमा पनि कसैले आजसम्म उसलाई ओछ्याएको थिएन ।
विचार गर्दै जाँदा उसलाई आफ्नै असुन्दरताको सबैभन्दा बढी माया लाग्दै थियो । किनभने, असुन्दरताले नै आफूलाई जोगाएको हो जस्तो लाग्यो उसलाई ।
प्रायः केटीहरु साँझ परेपछि घरबाट निक्लिन सक्तैनन् । एक्लै हिँड्नु त झन् कति असुरक्षित कुरा । दिउँसो पनि उनीहरु कति सजग भएर हिँड्छन् । अझ सहर सिकारका लागि पन्जा उठाएर बसिरहेको हुन्छ लुकेर गल्लीगल्लीमा पासो थापेर । त्यसैले साँझ नपर्दै केटीहरु जहाँ गए पनि घर आइपुग्छन् र सुरक्षित महसुस गर्छन् । घर नहुनेहरु कसरी सुरक्षित हुन्छन् ? कहाँ सुरक्षित हुन्छन् ? कसले सुरक्षा गर्छ घर नहुनेहरुलाई ?
अठार वर्ष पूरा भएर उन्नाईस पनि लागी, छयालीस सालले । आइमाईको बैंस हलक्क बढ्छ । हलक्क बढ्ने उमेर सकियो अब । घरै नभए पनि बेला भएपछि घर हुनेहरुको सँगसँगै घर नहुनेहरुको पनि बैंस आउँदो रहेछ । यही हो बै�
© सर्वाधिकार 2012 - 2018 | हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.